हरि रोकाको आक्षेपप्रति मेरो प्रतिवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
दुई देशबीचको पानीढलो सीमारेखा काट्नेबित्तिकै अर्को पाइला टेक्ने ठाउँचाहिँ नेपालको सगरमाथा शिखर नै हो ।
जेष्ठ २६, २०७८ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
चुचुरोमा यस्तो विभाजक रेखा सृजना गर्न सकिन्छ/सकिँदैन र सकिने/नसकिने जेसुकै भए पनि यसमा चीनको भित्री मनसाय के थियो/छ भन्ने जान्न सकिएको छैन । सीएनएन, बीबीसी, रोएटर्सजस्ता विश्व सञ्चारमाध्यमले यस सम्बन्धमा जिज्ञासा व्यक्त गरी समाचार प्रसारण प्रकाशन गरेका छन् । यसर्थ यसबारे यहाँ छोटकरीमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।
चुचुरोमा विभाजक रेखा खिच्न आवश्यक परेका सम्बन्धमा चीनको भनाइ छ, ‘नेपालतर्फको आधारशिविरमा रहेका आरोहीहरूलाई गत अप्रिल महिनादेखि कोरोना भाइरसले गाँजेको छ । पर्यटन राजस्वको भोको नेपाल सरकारले मनसुन वर्षाअघि वसन्त ऋतुको जुन महिनादेखि आरोहण गर्न दिइएको अनुमति रद्द गर्नुपर्छ । नेपालमा ७ मेमा एकै दिन सबभन्दा धेरै ९,०२३ जना संक्रमित भए । जबकि चीनमा ८ मेका दिन १२ केस मात्रै थिए । यिनीहरू सबै समुद्रपारबाट आएका यात्रु थिए ।’ (रोयटर्स, ८ मे २०२१)
कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले गत वर्ष तिब्बततर्फबाट कुनै विदेशीलाई आरोहण अनुमति दिइएको थिएन । तिब्बती आधारशिविरबाट चोमोलुङ्माको दृश्यावलोकन गर्न जाने तिब्बती पर्यटकलाई यस पटक पनि रोक लगाइएको छ । यसै कारण चुचुरोमा विभाजक रेखा सृजना गर्नुपरेको हो भन्ने चीनको भनाइ छ ।
वैशाख २८ को ‘काठमान्डु पोस्ट’ को प्रश्नमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘चुचुरोमा विभाजक रेखा सृजना गर्न कसैलाई पनि अनुमति छैन । सगरमाथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । विभाजन रेखा खिचिने भनिएको बारे चीनबाट कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन । चीनबाट कुनै व्यक्तिले यस्तो भने पनि यो हुन्छ भन्ने छैन ।’
यस वसन्त ऋतुको सिजनमा नेपाल सरकारले ४३ आरोहण दलका ४०८ पर्वतारोहीलाई आरोहण अनुमति दिएको छ । यीमध्ये ९३ महिला र ३१५ पुरुष छन् । प्रत्येकसँग ११ हजार अमेरिकी डलर दस्तुर लिने गरिएको छ । यस सिजनमा सरकारले ६६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि एक नर्वेजियनसहित ३० जनाजति संक्रमित आरोही आधारशिविरबाट काठमाडौं फर्किएका छन् । यस सिजनको पहिलो टोलीका रूपमा कामी रिता शेर्पाले आफ्नो पहिलेको रेकर्ड तोडी वैशाख २४ गते २५ औं पटक सफल आरोहण गरेका छन् । जेठ ४ मा बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद–अल खलिफासहित १२ जना विदेशीले समेत सफल आरोहण गरे । १६ वर्षीय सोनाम शेर्पा र उनका बाबु पूर्णकुमार (पीके) ले जेठ ९ गते शिखर पुगी बाबुछोरा एकैसाथ पुगेको रेकर्ड कायम गरे ।
जेठ १४ सम्ममा स्वदेशी र विदेशी गरी ३३० जनाले सगरमाथा चुचुरो चुमिसकेका छन् । यो हरफ लेख्दै गरेको समयसम्म अझ केही आरोही सफा मौसम पर्खेर आधार तथा दोस्रो शिविरमा प्रतीक्षारत छन् । आरोहणका क्रममा अक्सिजन अल्पता र अन्धोपन भएका कारण दुई विदेशी आरोही र खर्पसमा खसी एक शेर्पाको मृत्यु भएको छ । पर्यटन विभागकी प्रवक्ता तथा लियाजो अफिसरका रूपमा आधारशिविर गएकी मीरा आचार्यले बाहिर हल्ला चलेजस्तो संक्रमणको कुनै समस्या नरहेको र सुक्षित ढंगले आरोहण भइरहेको बताएकी छन् ।
विभाजक रेखा कसरी सृजना गरिँदै छ ?
रेखा रचना गर्नका लागि चीनको तिब्बती पथप्रदर्शकको सानो टोली सगरमाथा शिखरमा उक्लने योजना थियो । २१ चिनियाँ नागरिक भएको समूह सगरमाथाको तिब्बती मोहडाबाट चुचुरो पुग्नुअघि तिब्बती पथप्रदर्शक टोलीले विभाजक रेखा खिची ती गाइडहरूमार्फत रेखा कार्यान्वयन गराउने चीनको मनसाय थियो । यद्यपि, तिनीहरू चुचुरोको मृत क्षेत्र (डेथ जोन), जहाँ अक्सिजनको अल्पता हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा रहनेछन् भन्ने कुरो स्पष्ट थिएन (रोयटर्स, ८ मे २०२१) । तर चीनले तिब्बततर्फबाट चोमोलुङ्मा आरोहण गर्ने कार्य मे १५ मा रद्द गरेको छ । नेपालबाट आरोहण गर्ने अस्ट्रियाको फुर्टेनब्याच एडभेन्चर कम्पनीले आधारशिविरमा रहेका २० आरोहीको आरोहण त्यसै दिन रद्द गरेको छ, कोरोना भाइरसलाई कारण देखाई ।
यी कुरा जेसुकै भए पनि चुचुरोमा कसरी विभाजन रेखा लागू गरिनेछ भन्ने कुराका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा यो कल्पित रेखा मात्र हुन सक्छ । भौतिक रूपले यहाँ रेखा स्थापना गरिने सम्भावना छैन । रेखाको रूपमा ३ मिटर लामो स्टिल पोललाई हिउँको थुप्रोभित्र डेढ–दुई मिटर धसाएर एकाध मिटर देखिने गरी राख्न सकिएला । तर कालान्तरमा त्यसलाई बेजोड हावाले ढाल्छ र हिउँले बगाएर लैजान्छ । यही हिउँ नै दक्षिणतिर खुम्बु हिमनदीका रूपमा मन्द गतिले बग्ने गर्छ ।
नेपाल–चीन सीमारेखा र सगरमाथा चुचुरो
सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको थियो । त्यसअनुरूप १९६२ मा सीमांकन भयो । सीमांकनमा पानीढलो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थियो । सगरमाथा चुचुरोको पश्चिमबाट छुराको धारजस्तो धारिलो परेको पानीढलो शृंखला पछ्याउँदै सीमारेखा शिखरको नजिकै उत्तरी छेउ पुगेको छ । यहाँबाट सीमा दक्षिणतर्फ हिलारी स्टेप, अनि थोरै पूर्व र त्यसपछि दक्षिण ल्होत्से हिमाल पुगेको छ ।
छुराको धारजस्तो सीमारेखाको उत्तरतिर चीन पर्छ । यो चिनियाँ भूभाग करिब ७० डिग्रीको एकदमै भिरालो अवस्थितिमा छ । यहाँको हिउँ चीनतिर बगिरहने भएकाले आरोहीहरू चिनियाँ भूमिमा धेरै मिनेट उभिन सक्दैनन् । दुई देशबीचको पानीढलो सीमारेखा काट्नेबित्तिकै अर्को पाइला टेक्ने ठाउँचाहिँ नेपालको सगरमाथा शिखर नै हो ।
सगरमाथा चुचुरो समुद्रको सतहबाट ८८४८.८६ मिटर अग्लो, ३ मिटर चौडा र ८ मिटर लम्बाइ भएको करिब २५ वर्गमिटरको दक्षिणतिर ढल्केको तर्प्याइँलो गरो (स्लोपिङ टेरेस) ले बनेको छ । यसमाथि डेढ मिटर चौडा र २ मिटर लम्बाइ भएको करिब ३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा हिउँको सानो ढिस्को छ । यही ढिस्को सर्वोच्च शिखर हो । यो चुचुरो सानो डाइनिङ टेबलजत्रो छ, जहाँ पाइला राखेपछि मात्र सगरमाथा विजेता बन्न सकिन्छ । यसलाई अझ खतरनाक क्षेत्र मानिन्छ । बेतोडको हावाहुरी चल्ने र एकै छिनमा मौसम बिग्रिन सक्ने भएकाले यहाँ कोही पनि धेरै समय उभिइरहन सक्दैनन् ।
चुचुरो नेपालको सरहदभित्र परेको छ । नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विवाद पर्दा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईको नेपाल भ्रमणका समय २०१७ वैशाख १६ गते सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सगरमाथा नेपालकै हो भनेका थिए । यसै क्रममा ‘कल्पना’ साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोररमण राणाको प्रश्नको जवाफमा उनले नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्न सकिने भनी समझदारी भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘यूएस पिरियोडिकल टाइम’ का संवाददाता डन कोन्नेरीले ‘सगरमाथा चीन र नेपालका बीच बराबर पारेर विभाजन गर्ने हो ? नेपाल यसमा मन्जुर छ ?’ भनी सोधेको प्रश्नको जवाफमा चाउ एन–लाईले भनेका थिए, ‘भाग लगाउने प्रश्नै आउँदैन ।’
केही अध्येताले चीनले चुचुरोलाई आधा–आधा पारी रेखा खिच्ने मनसायले अहिले विभाजक रेखाको परिकल्पना गरेकाले सञ्चारमाध्यममा आएको हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । राजनीतिक हिसाबले चीनले नेपाललाई फकाएर शिखर आधा भाग लगाउन खोज्यो भन्ने शंका नेपालको सीमित राजनीतिक वृत्तमा परेको यदाकदा सुनिएको छ । तर यो सम्भावना छैन । चाउ एन–लाईको भनाइ अहिलेसम्म अडिग छ । सगरमाथाका सम्बन्धमा दुवै देशले मिलेर काम गर्छन् भनी सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर संयुक्त रूपले २०७७ मंसिर २३ मा भएको घोषणाबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
चीनले अहिले ‘लाइन अफ सेपरेसन’ खिच्ने नै भए पनि छुराको धारजस्तो पानीढलो सीमाको नेपालतिर पर्ने २ मिटर लाम्चो चुचुराको आधा भागमा खिच्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसारको सीमारेखा मान्ने हो भने सगरमाथा चुचुरो आधा–आधा भन्ने भान पर्न सक्छ । त्यसैले यो लाइन खिच्ने आवश्यकतै पर्दैन । चुचुरोको ठीक उत्तर प्राकृतिक पानीढलो सीमारेखा कायम छँदै छ ।
दोस्रो कुरा, विभाजक रेखा खिचेर चीन र नेपालतर्फबाट सफल आरोहण गर्नेहरूलाई एकआपसमा मिसिन नदिने मनसाय चीनको देखिन्छ । यथार्थतः आरोहीहरू त्यहाँ लामो समय संसर्गमा आउँदैनन् । सफल आरोहण गरेपछि फोटो/भिडियो खिचेर फर्कनै हतार हुन्छ । तेस्रो, आरोहीहरू स्वयम् अक्सिजन मास्कमा हुनाले र बाक्लो पोसाकले पीपीईको काम गर्ने भएकाले कोरोना भाइरस सार्ने गुन्जायस नै रहँदैन । चौथो, कोरोना भाइरस संक्रमित आरोहीलाई चुचुरो पुग्न स्वास्थ्यले नै दिँदैन । पाँचौं, शिखरमा एक पटकमा छ–सात जनाभन्दा बढी आरोही उभिने ठाँवै छैन । धेरै संख्यामा एकै पटक शिखरमा पुगेका आरोहीहरू छ–सात जनाको खेपमा आलोपालो गरी फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्तो थापेर चुचुरोमा विभाजक रेखा सृजना गर्न प्राविधिक दृष्टिले आवश्यक पर्दैन । अहिले आएर चीनले आरोहण रद्द गरे पनि एकतर्फी तरिकाले रेखा खिचिए यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०७:४०